Ciidamada dawlada KMG oo hawlgalo ka sameeyey degmada Ceelwaaq ee Gedo – SBC
Ciidamada dawlada KMG oo hawlgalo ka sameeyey degmada Ceelwaaq ee Gedo
Posted by Webmaster on September 17, 2011 Comments
Ciidamada Dowlada KMG ah ee ku sugan gudaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa wada howgalo xoogan oo ay ku sugayaan amaanka deegaankaasi, ka dib markii ay soo bexeen cabashooyin ku aadan Amaanka oo ka soo baxayay dadweynaha magaaladaas.
Dadka ayaa waxay sheegeen in xiliyada habeenkii ah ay kooxo burcad ahi u istaagaan wadooyinka islamarkaana waxyeelo ugeysta haweenka kana furta wax walba oo ay dadku sitaan.
Dadka qaarkiis ayaa muujiyay fikrad ah in kooxahaasi ay ka mid yihiin ciidamada DKMG ah , balse saraakiisha ciidamada ayaa arintaasi ku tilmaamay wax aan jirin iyagoona bedelkeed bilaabay howlgalo lagu qaadayo kooxahaasi hubeysan si shacabka loogaga qabto.
Waxaa sidoo kale lagu amray Ciidamada in aysan ka bixin xeryahooda ka dib qorxda marka ay dhacdo.
Dhinaca kale waxaa isla degmada Ceelwaaq ee ay ku sugan yihin ciidamada Dowlada KMG ah ka jira dhaq dhaqaaqyo ay Saraakiisha ciidamada DKMG ah ku doonayaan in ay ciidan cusub ku qortaan si ay ugu qaadaan tababar dalka dibadiisa, waxaana sidaasi u xaqiijiyay xafiiska SBC ee Gedo saraakiil ka tirsan kuwa ciidamada DKMG ah ee halkaasi ku sugan.
Degmada Ceelwaaq ayaa todobaad ka hor waxaa ka dhacay dagaalo xoogan oo mar ciidamada Dowlada banaanka looga saaray inkastoo ka dib saacado ay dib ugu soo noqotay gacan ku heynta magaaladaas, waxaana dagaaladaasi ay sababeen khasaare naf iyo maalba leh sida lagu hayo wararka xaqiiqada ah.